IMEX America Smart Monday keynotes ayaa iftiiminaya dhakhtar, qoob ka ciyaarka iyo guruug dijitaal ah.
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka USA » IMEX America Smart Monday keynotes ayaa iftiiminaya dhakhtarka, qoob ka ciyaarka iyo guruugga dijitaalka ah
IMEX America Smart Monday keynotes ayaa iftiiminaya dhakhtarka, qoob ka ciyaarka iyo guruugga dijitaalka ah
Barnaamij bilaash ah oo barasho ah ayaa soconaya bandhigga IMEX America oo dhan, laga bilaabo maalin kasta iyada oo la adeegsanayo astaamaha 'MPI' - taxane isugu jira dhaqdhaqaaqyo iyo dhaqdhaqaaqyo ka imanaya meel ka baxsan meheradda dhacdooyinka ganacsiga kuwaas oo mid kastaaba keenaya aragtidiisa gaarka ah ee adduunka ee dhacdada.
Marka ugu horeysa ee laga hadlo IMEX America keyI key wuxuu noqon doonaa dhakhtar abaalmarin ku guuleystay Harvard-tababaran.
Marka xigta safka, waa kan haysta kala soocida sida "qorayaasha adduunka ugu jecel."
Ugu dambeyntii, aasaasaha dhaqdhaqaaqa qoob-ka-ciyaarka adduunka. Kuwani waa kuwa ugu muhiimsan ee ka hadla IMEX America ee Las Vegas bisha Nofembar.
• Dr. Shimi Kang waa dhakhtar lagu tabobaray Harvard, khabiir warbaahineed iyo macallin ku saabsan dhiirigelinta aadanaha. Iyadoo 20 sano oo khibrad caafimaad ah iyo cilmi baaris ballaaran oo xagga sayniska ah oo ka dambeysa hagaajinta garaadka aadanaha, Shimi waxaa lagu wadaa inay bixiso qalab wax ku ool ah oo lagu kobcinayo xirfadaha muhiimka ah ee qarniga 21aad ee adkeysiga, isku xirnaanta, hal-abuurka, iyo inbadan.
• Qoraaga ugu iibinta badan Erik Qualman wuxuu sahmin doonaa "socialnomics" - saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay nolol maalmeedkeenna, iyo sida ganacsatadu uga faa'iideysan karaan awooddooda. Taladiisa dijitaalka ah ee dijitaalka ah waxaa isticmaalay ururo ay ka mid yihiin Ilaalada Qaranka iyo NASA waxayna u horseeday in loo doorto mid ka mid ah 'qorayaasha ugu caansan adduunka'.
• Iyadoo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka adduunka, Radha Agrawal wuu ogyahay waxa loo baahan yahay si loo dhiso bulsho. Daybreaker, oo ah qoob ka ciyaarka subaxa hore iyo dhaqdhaqaaqa fayoqabka, ayaa munaasabado ku qabta 25 magaalo oo adduunka ah iyada oo leh bulsho ku dhow nus milyan qof, Radha ayaa la wadaagi doonta sida ay isugu keentay qabiilkan xoogga badan, qoob-ka-jecel.
Waxbarashadu waxay ka bilaabataa Smart Monday
Smart Monday, oo ay ku shaqeyso MPI, waa suufka lagu bilaabayo barnaamijka waxbarashada IMEX ee IMEX America. Ka qabsoomida Nofeembar 8, Smart Monday waa maalin buuxda oo barasho ka hor inta aan bandhiggu furmin Noofambar 9 - 11. Barnaamijka dib ayaa loogu cusboonaysiiyay si loo muujiyo baahiyaha isbeddelaya ee xirfadlayaasha dhacdada leh shirkad xoogga saar dib u dhiska si ka wanaagsan.
Waxaa ka mid ah: Janet Sperstad, Agaasimaha Kulliyadda, Maareynta Dhacdooyinka Maareynta Dhacdooyinka ee Madison College; Guy Bigwood, Maamulaha Agaasimaha Dhaqdhaqaaqa Waaritaanka Caalamiga ah iyo qoraaga IMEX Warbixintii Kacaankii Cusboonaysiinta; iyo David Allison, oo ah aasaasaha Valuegraphics, oo ah qiime ku saleysan qiimeyn iyo caqli caadi ah oo suuq geyn ah.
Waxaa sidoo kale jiri doona kal-fadhiyo ka socda IAEE, EIC iyo MPI, oo lagu daray She Means Business oo ururiya hoggaamiyeyaasha haweenka si loo sii wado wadahadalka ku saabsan kala duwanaanta iyo sinnaanta qaybaha dhacdooyinka ganacsiga.
Annette Gregg, SVP of Experience at MPI, comments: “Waxaan ku faraxsanahay mar kale inaan noqono lamaanaha istiraatiijiyadeed ee waxbarasho ee IMEX America, barnaamijyada Smart Monday iyo astaamaha maalinlaha ah. Waxaan diyaarinay xulasho isku dheelitiran oo saameyn sare leh oo kuhadla kuwa kuhadlaya horumarka shaqsiyadeed iyo xirfadeed. Waxaan rajeyneynaa IMEX America kale oo guuleysata dhacdooyinkeena bulshada. ”
"Barnaamijkeenna barashada wuxuu had iyo jeer ahaa aasaaska IMEX America," ayay sharraxaysaa Carina Bauer, oo ah madaxa IMEX Group. “Marna kama badna sanadkan marka xirfadleyda dhacdooyinka ganacsiga ay aad u xiiseeyaan ilaha iyo isku xirnaanta si ay ugu wareegaan muuqaal ganacsi oo si muuqata u kala duwan. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno MPI si aan u soo bandhigno taxane taxane ah oo muhiim ah, dhammaan khubarada ku xeel dheer arimahooda, wadaagista aragtiyada cusub ee dhaqanka aadanaha dhinacyo badan. Wadista dabeecadaha la doonayo, sidaan ognahay, waxay fadhidaa wadnaha dhamaan qorshaynta iyo fulinta. ”
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan buuxa Smart Isniin barnaamijka ayaa shaaca laga qaadi doonaa dhawaan.
Diiwaangelinta wuxuu hadda u furan yahay IMEX America oo dhacaya 9 - 11 Nofeembar Mandalay Bay ee Las Vegas oo leh Smart Monday, oo ay ku shaqeyso MPI, 08 Nofeembar. Si aad isu diiwaangeliso - bilaash - guji halkan.
Ujeeddada kaliya ee IMEX waa in la mideeyo oo la horumariyo warshadaha shirarka - iyadoo la sameynayo wax kasta oo ay awood u leedahay inay wax ku barato, ku cusbooneysiiso, ugana caawiso kaqeybgalayaasha inay xiriir adag la yeeshaan dadka saxda ah. Adduunyo ganacsi wanaagsan uu ka gudbo xuduudaha iyo badaha, halkaas oo qorsheeyayaasha kulanku ay si fudud ugu xirmi karaan alaab-qeybiyeyaasha adduunka oo dhan ayna dhisaan xiriirro shaqo oo xoog leh - taasi waa aragtida IMEX.
Tayada ayaa hoosta ka xariiqaysa wax kasta oo IMEX ay qabato, laga bilaabo qaabka ay u qaabeeyso bandhigyadeeda si ay ugu habboonaato ka qaybgalayaasha, ilaa habka ay si taxaddar leh u hubiso faahfaahin kasta oo iyaga ka mid ah. IMEX waxay aaminsan tahay awoodda isu keenidda dadka si ay fikradaha u wadaagaan, u ogaadaan qalab cusub, u bartaan xirfado cusub, una dhiirrigeliyaan hal-abuurnimo.